Fact Check: UECက NLDအတွက် မဲ ၃သန်းကျော်ခိုးကြောင်း Defend Europeအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား - Factcrescendo Myanmar
Defend Europeအဖွဲ့က NLDပါတီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သံသယရှိတာကြောင့် မဲစားရင်းတွေကို လေ့လာရာ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမှန်တကယ်မဲပေးခွင့်ရှိသူမှာ (၃၅.၉၄)သန်းကျော်သာရှိပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UECက ထုတ်ပြန်တဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၃၈သန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတာက UECက NLDအတွက် မဲ ၃သန်းကျော်လောက် ခိုးပေးခဲ့ကြောင်းကို RFM (Radio Free Myanmar)ကို အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ကူးယူတာတွေ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ ပြုလုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ပို့စ်မှာ “မဲများပက်ပက်စက်စက်ခိုးခဲ့သည့် NLD”လို့ အညွှန်းတပ်ထားပြီး အောက်မှာတော့ “ RFM : Maryland,4– 12 – 2020၊၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားဝင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးအတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ(၃၅.၉၄) သန်းကျော်သာရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က (၃၇)သန်းကျော်ဟု၎င်း၊ (၃၈)သန်းကျော်ဟု၎င်း၊ (၄၂)သန်းကျော်ဟု၎င်း၊ NLD ပါတီမှ ခိုး၍ထည့်ထားသော မဲများအပေါ်လိုက်၍ အမျိုးမျိုးပြောင်း လဲနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Defend Europe အဖွဲ့မှ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများက ဒီမိုကရေစီကို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်စေသော အာဏာရူး ပါတီ၏လုပ်ရပ်ကို သံသယရှိ၍ မြန်မာဗဟိုUEC မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးမှ ပေးပို့နေသော မဲစာရင်းများအား ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်းသာတွေ့ရှိရသည်ဟု RFM သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။Defend Europe ၏ပေးပို့ချက်အရ ပြည်နယ်တိုင်းအလိုက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်း ၅ . ၈ သန်း၊ မန္တလေးတိုင်း ၄ . ၉၄ သန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၄ . ၂ သန်း၊ မကွေးတိုင်း ၃ . ၂ သန်း၊ ပဲခူးတိုင်း ၃ . ၈ သန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ၄ . ၅ သန်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ၁ . ၁ သန်း၊ ကချင်ပြည်နယ် ၁ . ၁ သန်း၊ ကယားပြည်နယ် ၀ . ၂ သန်း၊ ကရင်ပြည်နယ် ၁ . ၁ သန်း၊ ချင်းပြည်နယ် ၀ . ၃ သန်း၊ မွန်ပြည်နယ် ၁ . ၈ သန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀ . ၄၄ သန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၃ . ၆ သန်းစုစုပေါင်း (၃၅.၉၄) သန်းကျော်သာရှိကြောင်း အတိအကျသိရှိရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အရ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၃၈)သန်းကျော်ရှိသည်ဆိုပါက ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် NLDပါတီအတွက် မဲပေါင်း (၃)သန်းကျော်ခိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စအား ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို လက်မှတ်ထိုး၍ခန့်အပ်ခဲ့သောသမ္မတဝင်းမြင့်က မည်သို့မျှကြပ်မတ်ခြင်းမရှိမှု့သည် သမ္မတ၏ အကြိုက်ပင်ဖြစ်၍ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု Defend Europe ကမှတ်ချက်ပြု၍ ပေးပို့လာသည်ကို RFMက လက်ခံရရှိသည်။crd #####”လို့ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီပို့မှာအဓိကညွှန်းဆိုထားတဲ့ “Defend Europe”ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကို Googleမှာရှာကြည်ရာမှာတော့ ဒီအဖွဲ့ဟာ ဥရောပကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေပတ်သက်ပြီး အဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကို လုပ်ကိုင်တဲ့ အဖွဲ့မဟုတ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မသက်ဆိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါလင့်ခ်တွေမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – link | Archive link
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း မဲစားရင်းတွေကို ချိတ်ပိတ်တဲ့အိတ်တွေနဲ့ထည့်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် မဲစာရင်းတွေကို မည်သူတစ်ဉီးတစ်ယောက်ကိုမှ မဲစားရင်းတွေကို မိတ္တူကူးခွင့်ပြုနိုင်မှာတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ကော်မရှင်က ဒီဇင်ဘာ ၇ရက်နေ့က ကြေငြာထားပါတယ်။အောက်ပါလင့်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – UEC link | Archive link
ဒါ့အပြင် RFM (Radio Free Myanmar)ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာက သတင်းအတု၊ သတင်းအမှားတွေကို ဆက်တိုက်ဖြန့်ဝေနေတာအကြောင်းကို Fact Crescendo Myanmarက “Radio Free Myanmar အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် သတင်းတုသတင်းမှားများဆက်တိုက်ဖြန့်ချိ”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Nowသတင်းဌားနကလည်း RFMရဲ့ သတင်းအတုဖြန့်ဝေမှုအကြောင်းကို “နိုင်ငံရေးသတင်းတုများ ဖြန့်ဝေနေသည့် Radio Free Myanmar (RFM) “ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းဆောင်းပါးရေးသားထားပါသေးတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ UECက NLDအတွက် မဲ (၃) သန်းကျော်ခိုးကြောင်း Defend Europeအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ သတင်းအမှားသာဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Title:UECက NLDအတွက် မဲ ၃သန်းကျော်ခိုးကြောင်း Defend Europeအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
Tagged Defend EuropeUECနိုင်ငံရေးရွေးကောက်ပွဲ